XOG CUSUB: Xiisad ka dhalatay ciidankii Itoobiya ee ku qul-qulay Dhuusamareeb & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Xiisad ka dhalatay ciidankii Itoobiya ee ku qul-qulay Dhuusamareeb &...
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Dood ayaa ka dhalatay Ciidamo Itoobiyaan oo la geeyay Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda mamulka Galmudug, kuwaasoo dadka qaarkood ay sheegeen in aysan qeyb ka heyn howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Saacaddihii lasoo dhaafay ayay soo shaacbaxday dooda ku aadan Ciidanka Itoobiya sababta keentay in xilligaan la geeyo Magaalada Dhuusamareeb oo ka mid ah meelaha ugu ammaanka badan Soomaaliya.
Musharax Cabdiraxmaan Odowaa oo ka mid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimada maamulka Galmudug ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay dooneyso in ay ku Afduubato doorashadda Galmudug Ciidan Itoobiyaan sidii ka dhacday doorashadii maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa uu hadalkiisa kusii daray “Mudane Madaxweyne waxaa Youtube-yada ka buuuxa warkaagii shalay, dhaqankaaga maantana cid walba waa arkayasaa, waxaan kuugula talin lahaa inaad is daba qabato, nama cabsi galinayaan ciidamada aad Dhuusamreeb ku sii daabulayso, dadka reer Galmudug na ma aha kuwa baqdin galinta wax looga helo”
Xildhibaan C/xakiin Macalin Axmed Maalin oo ah Xoghayaha Guud ee Xisbiga Himilo Qaran oo qeyb ka ah Madasha Xisbiyadda Qaran ayaa beeniyay in magaalada Dhuusamareeb ay soo gaareen Ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ka tirsaneyn howlgalka AMISOM.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Ciidanka Itoobiya ay horay u joogeen Magaalada, islamarkaana ay qeyb ka yihiin Ciidanka AMISOM ee ku sugan Garoonka Magaalada Dhuusamareeb.
“Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Galmudug la wadaago inaaney waxba ka jirin wararka lagu sheegay in Dhuusamareeb la geeyay Ciidama Itoobiyaan ah oo aan AMISOM ka tirsaneyn”ayuu yiri Xildhibaan C/xakiin Maalin.
“Waxaa jira ciidamada Djibouti iyo kuwa Ethopia oo Dhuusamareeb ku sugnaa muddo aan ka yareyn sadax bilood, hayeeshee ciidamadaasi waxay ka wada tirsanyihiin AMISOM. Waana ay dhacdaa in ciidamadu ay sameeyaan dhaqdhaqaaq xagga kalabadalka ciidanka ama logisticada ah”ayuu hadalkiisa ku daray.
Sidoo kale, waxaa jira dad badan oo dhankood si aad ah maanta uga hadlaya Arrimaha ku aadan Ciidanka Itoobiya ee la geeyay Dhuusamareeb in ay ku lug yeelan doonaan doorashadda maamulka Galmudug.
ciidanka Itoobiya ee galay Dhuusamareeb
Villa Soomaaliya shir qool damacsan